Huawei site | Actually: Max Battery Booster
This ROM is bothastock B550 as from Huawei andacustom ROM. So let’s just say that this could beaway to update your phone without using Huawei recovery, or installanice and personalized ROM.
How is it possible? Let’s introduce the AROMA installer. With this little software that run over the recovery you won’t need to doalot of passage to customize your ROM insideachinese recovery.
Le Huawei Honor3qui va être annoncer le 18 juin devrait être en métal et en voici des photos, il devrait avoir une taille d’écran de 4.7 pouces voir 5, pour l’instant aucune caractéristique n’a été dévoilé, nous verrons donc le 18.
Huawei Ascend G510 က တစ်သိန်းဝန်းကျင် ဖုန်းတွေထဲမှာ အလန်းဆုံး စမတ်ဖုန်းလို့ဆိုချင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းဈေးကွက်ထဲကို ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲ အဝယ်လိုက်ခဲ့တဲ့ စမတ်ဖုန်းပါ။ ပါးလွှာပြီး ကြီးမားတဲ့ ၄.၅ လက်မ မျက်နှာပြင်က အခြားဖုန်းတွေထက် အပြတ်အသတ်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်တာပါ။ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားပြီး ဈေးနှုန်းသင့်တင့်တာကြောင့် ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ အရောင်းရဆုံး စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ IPS မျက်နှာပြင်ကြောင့် အရောင်အသွေးစိုပြည်တဲ့ မျက်နှာပြင်ကို မြင်တွေ့နိုင်တာ အားရစရာတစ်ခုပါ။ Ascend G510 က ၂၀၁၃ ဇန်နဝါရီလမှာ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ စမတ်ဖုန်းသစ်တစ်လုံးပါ။ ၂၀၁၃ ထုတ် မော်ဒယ်မြင့် စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒီဇိုင်းပုံစံက Huawei C8813 နဲ့ ဒီဇိုင်းပုံစံဆင်တူတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကလည်း သိပ်ကွာခြားမှုမရှိပါဘူး။ ဖုန်းမှတ်ဉာဏ်အတွက် Internal4GB တို့ကို ထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Android v4.1 (Jelly Bean) ဗားရှင်းအမြင့်ကို အသုံးပြုပေးထားတဲ့အပြင် 1.5 GHz Dual-core Processor ထည့်သွင်းထားတာကြောင့် ဖုန်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က မြင့်မားနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။5MP နောက်ကင်မရာကလည်း အသုံးပြုသူတွေကို စိတ်ကျေနပ်မှု ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ အလင်းအားကောင်းဖို့အတွက် LED မီးကိုလည်း အနောက်ပိုင်းမှာ တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ရှေ့မှာတော့ 0.3MP ကင်မရာ တစ်လုံး တပ်ဆင်ထားပါသေးတယ်။ Bluetooth နဲ့ Wi-Fi စနစ်တွေကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။
– 4.5” IPS LCD Touchscreen
– GSM Network
–5MP Camera (Main), 0.3 MP (Secondary)
ဈေးနှုန်း : ၁၁၀,၀၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်
ဝယ်ယူနိုင်မည့်နေရာ : KKA
ဖုန်း : 01-246 427
Straight Talk Huawei Ascend Y Prepaid Cell Phone
T-Mobile Sonic Mobile Huawei Device
Create your own personal hotspot on the go with the T-Mobile Sonic 4G Mobile HotSpot get high-speed Internet on up to five Wi-Fi devices, usingasingle mobile broadband connection. “Replacement Device” “No Contract Changes”